ဝိုင်ဖိုင်အမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။ Gadget သတင်း
ပထမ ဦး ဆုံးအိမ်များအတွက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ broadband, ADSL နှင့် fiber optics တို့ရောက်လာသည်။ ပြီးတော့အရင်ကတွေမသေချာမရေရာတဲ့အချိန်မှာ WiFi ကငါတို့အိမ်တွေကိုရောက်လာတယ်။ ထို့အပြင်သူနှင့်လက်ချင်းချိတ်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာမည်သူစိမ်းမဆို၊ သော့ကိုသိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲ GUTS သို့ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကျူးကျော်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ရက်ကြားရှိအဓိကအတားအဆီးမှာဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်၏စကားဝှက်ဖြစ်သည်။ အဲဒါမရှိရင် router ကိုတောင်ဆက်သွယ်ဖို့တောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တကယ်တော့ device အသစ်တစ်ခုကနေဆက်သွယ်ချင်တဲ့ပထမခြေလှမ်းကအဲဒီ key ကိုထည့်တာပါ။ သို့သော်၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောအတားအဆီးဖြစ်သလော။ ငါတို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲတတ်ရန်သင်ယူပါနှင့်သင်၏ကွန်ယက်တွင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းများကိုရှောင်ရှားရန်။
2 ပထမအချက် - router ကိုသုံးပါ
3 192.168.1.1 နဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ WiFi ကွန်ယက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ရန် ၄ င်း၏အစီအစဉ်ကို ဦး စွာသိရမည်။ အသုံးအများဆုံးမှာ router တစ်လုံးရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ကုမ္ပဏီမှထောက်ပံ့ပေးသောထို router သည် signal ကိုဖြန့်ဝေရန်ကေဘယ်ကြိုးနဲ့ကြိုးမဲ့စနစ်နှစ်ခုစလုံးကိုကျန်ကိရိယာများသို့
ဒါပေမဲ့ ဘယ်မှာဖြစ်ရပ်များရှိရလိမ့်မည်router နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများအကြား (လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ ကွန်ပျူတာများစသဖြင့်) ။ ရဲ့အခြားတံတားတစ်ခုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ကြကုန်အံ့ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်၏ signal ကိုချဲ့ထွင်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းတွင်မြန်ဆန်သောဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်စေ။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကတိကျစွာသင်တို့ကိုပြောသည် သင်၏ WiFi ကွန်ယက်၏အချက်ပြမှုကိုမည်သို့တိုးမြှင့်နိုင်ပြီးယင်း၏အကွာအဝေးကိုတိုးချဲ့နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည်လိမ့်မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သော repeaters အဖြစ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီးရီးမှတဆင့်။
ပထမအချက် - router ကိုသုံးပါ
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်လုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းမှကာကွယ်ရန်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန် router ကိုဆက်သွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကဝက်အူလှည့်ယူပြီးအတွင်းထဲဝင်ဖို့ဖွင့်တာကိုမဆိုလိုပါဘူး။ ဒါထက်အများကြီးပိုရိုးရှင်းပါတယ်
ကွန်ရက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့်စက်ကိရိယာမဆို၊ ကွန်ပျူတာ၊ တက်ဘလက်၊ Router မှာလည်းသူ့ကိုယ်ပိုင်လိပ်စာရှိတယ် အတွင်းမှာ။ ကောင်းပြီ၊ အဲဒါကိုကြည့်ဖို့အဲဒီလိပ်စာကိုရှာရမယ်။ ယေဘူယျစည်းမျဉ်းအရ router သည် network အတွင်းပထမဆုံး element ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာကွန်ယက်သို့ချိတ်ဆက်နေသောကျန်စက်ပစ္စည်းများသည်မိုဘိုင်းဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ၉၉% တွင် router address သည် 99 ဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလိပ်စာကို Chrome, Opera, Safari, Firefox စသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောဘရောင်ဇာတွင်ထည့်ပြီးမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမဆိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အတိုင်း enter key ကိုနှိပ်ပါ။ စာမျက်နှာဖွင့်ပြီးတာနဲ့ငါတို့တွေ့လိမ့်မည် configuration ကိုသုံးရန် username နှင့် password တောင်းသည် ၎င်း။ ဤရွေ့ကားဝင်ရောက်ခွင့်ဒေတာက၎င်း၏အောက်ခြေမှာတွေ့နိုင်ပါသည်WiFi ကွန်ယက်အတွက်ပုံမှန်စကားဝှက်နှင့်အတူ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် router ၏ configuration menu ကို ၀ င်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ကျနော်တို့အလိုတော်မှာ parameters တွေကို၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကကွဲပြားနိုင်သည် ၎င်း။ ပုံစံနှင့်ပုံစံပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်မှုအနည်းငယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းလိမ့်မည်Blusens ကနေပေမယ့် ကျနော်တို့နိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သော parameters တွေကိုထိရန်အကြံပြုပါသည် router သို့မဟုတ် internet connection ကိုတောင်မှမှားယွင်းစွာပြုပြင်မိနိုင်ပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုမှလာရောက်လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သိသောသူများကိုလုံခြုံစွာကပ်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း၊ ငါ့ကိစ္စမှာ Movistar ADSL router နဲ့အတူ \_ t လက်ရှိဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှုစကားဝှက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သော်လည်းသတိထားပါ၊ ၎င်းကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်တွင်၎င်း၊ WiFi ဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးသည်အလိုအလျောက်ပြတ်တောက်သွားလိမ့်မည်။ ထပ်မံ၍ ဆက်သွယ်မှုကိုပြန်လည်ခံစားနိုင်ရန်အတွက်စကားဝှက်ကိုပြန်ထည့်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်သည်, ဒီအချိန်မှာ, ကျွန်ုပ်တို့၏ WiFi ကွန်ယက်အမည်ပြောင်းပါ၎င်းသည်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်ချိတ်ဆက်လိုသောစက်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုပြလိမ့်မည်။ နယ်ပယ်များကိုပြုပြင်ပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားကြစို့။ configuration ကိုသုံးရန်စကားဝှက်တစ်ခုရှိကြောင်းသင်မှတ်မိပါသလား။ လိုချင်ရင်ကောင်းပြီ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့် ပို။ ပို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ယက်၏, Configure ကိုလည်းရယူရန်ထိုစကားဝှက်ကိုပြောင်းသင့်သည်။ သတိရပါ ဆက်သွယ်မှုကိုခိုးယူခြင်းမှအတားအဆီးအားလုံးသည်အနည်းငယ်သာရှိသည် သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောဒေတာများပင်။
တူညီတဲ့ configuration မျက်နှာပြင်မှာ, ငါတို့အမှု၌, ငါတို့၏ option ရှိသည် ပြောင်းလဲမှု password ကို. အပေါ်ကပုံမှာတွေ့ရတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင် drop-down တခုပေါ်လာလိမ့်မယ် စကားဝှက်အဟောင်းကိုဖော်ပြပြီးစကားဝှက်အသစ်ကိုနှစ်ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ရမည် ကျွန်တော်တို့ router ကိုဆက်သွယ်ဖို့တည်ဆောက်ချင်တယ်။
သတိရပါ router model ပေါ် မူတည်၍၊ကောင်းပြီ၊ ငါရွေးချယ်ရန်မီနူးများအကြားတွင်ရွေးစရာတစ်ခု ရှိ၍ ဤပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်နီးကပ်နေသောခလုတ်များမရှိ။ ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် မတူညီသောမီနူးများအကြားသွားလာကြည့်ပါ၊ WiFi ကွန်ယက်၏လုံခြုံရေးကိုရည်ညွှန်းသည့်အရာတစ်ခုကိုရှာဖွေပါ အမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်၊ သို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် Access ကိုဒေတာရန်.
ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောတပ်ဆင်မှုကိစ္စများတွင်, အပို element တွေရှိတယ်သို့မဟုတ်ငါတို့ရယူချင်သော router ကိုကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါဘူး, router ၏ IP address သည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ ဒါဆိုရင်, ကျနော်တို့ထွက်ရှာရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ တကယ်ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အရေအတွက်အနည်းငယ်သာကွဲပြားလိမ့်မည် "192.168.xx" ကိုအမြဲတမ်းသိမ်းထားလိမ့်မည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ operating system ကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် Windows ကိုကျနော်တို့ရပါလိမ့်မယ် Access ကို command prompt ကိုဆိုလိုသည်မှာ start နှင့် type ကိုနှိပ်ပါ CMD။ ပုံမှန် black windows command window ပွင့်လာလိမ့်မည် စာအရေးအသား ipconfig Enter ကိုနှိပ်ပါ ငါတို့ဆက်သွယ်မှု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုပြပါလိမ့်မယ်.
အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအားလုံးပြီးတာနဲ့ငါတို့ကြည့်ရမယ် ပုံမှန်တံခါးပေါက်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုညာဘက်တွင်ရှိသောအမှတ်အသားသည်ကျွန်ုပ်တို့ router ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သင်သုံးလျှင် မက်ဤအဆင့်သည် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် ခလုတ်ကိုဖိထားပါ အားလုံး တစ်ချိန်တည်းမှာငါတို့ကီးဘုတ်ပေါ် WiFi connection menu ကိုနှိပ်ပါထိပ်ဘားပေါ်မှာ။
ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်တန်ဖိုးမှာဘောင်ဖြစ်သည်၊ router လိပ်စာ။ အမှုတစ်ခုစီ၌၎င်းသည်ကွဲပြားလိမ့်မည် "192.168.xx" ပုံစံကိုအမြဲလိုက်နာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ router သည်မည်သည့်လိပ်စာရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုရယူရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဒါကိုလုပ်ရမယ် ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုရိုက်ထည့်ပါ ဝင်ရောက်ရန် Enter ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီကနေခြေလှမ်းများ၏ကျန်သင်အရင်မြင်ခဲ့ပြီးအတိုင်းအတိအကျအတူတူဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များဖြင့်သင်ရရှိလိမ့်မည် သင်၏ WiFi ကွန်ယက်၏လုံခြုံရေးကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်နှင့်အားလုံးအထက်တွင်ဒေတာကိုလုံခြုံစောင့်ရှောက်။ ဒါပေမယ့်ပေမယ့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများ၏အခွင့်အလမ်းကိုသင်လျှော့ချလိမ့်မည်သင့်မှာသံသယရှိနေသေးရင်၊ သင်ဤနည်းနည်းလမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါသည် တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ရဲ့ဝိုင်ဖိုင်ကိုတကယ်ခိုးတာဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ဝိုင်ဖိုင်အမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ